काका र फुचुंग्री (भाग १८) -::नेपाली एकता – विश्वभरिका श्रमजीवीहरुको आफ्नै आवाज
फुचुंग्री : घैंटामा घाम लाग्यो भनेको के हो र ?
काका : फरक मत राखेका कथित विद्रोही स्वोघोषित क्रान्तिकारीहरु माओवादीमा जानलाई मोलभाउ गर्दै छन्, उनीहरूको पछि लाग्नेहरूलाई तातो आलु निल्नु नओकल्नु भाको छ, इमान्दार नेता कार्यकर्ता समर्थकलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गरिएको छ । समयमै उचित निर्णय गरेर मूल घरमा वापसी गर्ने हाम्रा मित्रहरूको घैंटोमा घाम लाग्यो भनिएको छ । ढिलो भय पनि थाहाँ पाए त सबैले ।
फुचुंग्री : नेकपा (मसाल) सही क्रान्तिकारी लाइनमा छ भन्न खोज्नु भएको हो हजुरले ?
काका : यो त विरोधीले समेत मानेको कुरा हो कि नेपालमा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै नेकपा (मसाल) मात्रै छ । दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्षको लागि आधार तयार पार्न जनसंघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । पार्टीको संगठनात्मक ढाँचा अर्धभुमिगत छ । पार्टी भित्र लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणाली छ । आमूल परिवर्तन गर्ने क्रान्तिकारी प्रतिबद्धता जनाएका लौह अनुशासित कमरेडहरु मात्र यो पार्टीमा टिक्न खटन लाग्न सक्छन्। पार्टी प्रवेशको प्रणाली कठिन छ । अरु बुर्जुवा पार्टीमा जस्तो हाम्रोमा टीका अबिर लगाएर प्रवेश गराईदैन । लामो समयसम्म जनवर्गीय संगठन मा परीक्षण कालमा काम गरेकाले मात्र पार्टी सदस्यता पाउँछन् । महामन्त्री, प्रवक्ता पीवीएम बन्नलाई झन् कडा परीक्षण कालबाट गुज्रनु पर्ने हुन्छ । त्यो पनि सानो गल्ति कमजोरी हुना साथ अनुशासनको दायरामा पर्छन् । लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिमा टिक्न नसक्ने अनुशासनको दायरामा अटाउन नसक्ने अराजक तत्वहरू विभिन्न प्रकारका बहाना बनाएर बाहिरिन्छन् । कथित जागरण क्लबका मान्छेहरूको चुरीफुरी पनि त्यसैको थप कडी हो। सबैले थाहाँ पाइसके ।
फुचुंग्री : अस्ति डिसेम्बर १२ मा भारतको भोपालमा मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय विस्तारित बैठक भएछ नि, काका त्यो के रहेछ ?
काका : म त्यही भीडमा पछि बसेर हेरिरहेको थिए । पहिला त मैंले पनि कुरो बुझिनँ, जब विभिन्न क्षेत्रबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिको रिपोर्टिङ सुने, सुन्दै बुझ्दै जाँदा सबै ठाउँमा संगठनको स्थिति मजबूत रहेको पाइयो । उपस्थित प्रतिनिधिहरूको जोस जाँगर सक्रियता देखेर म त दंगै परे । यस्ता होनाहार नेता कार्यकर्ता रहेछन् ति दुई चार जना फुटपरस्त तत्वहरूलाई के टिक्न दिन्थे, जहाँ ति दुई चार जना फुटपरस्त तत्वहरू छन् त्यहीका प्रतिनिधिले आगामी २०२२ फरवरी २७–२८ र मार्च १ मा हुन गइरहेको आठौं अखिल भारत नेपाली एकता सम्मेलन सफल पार्ने जिम्मा हामी लिन्छौं भन्दा हलमा तालीको गडगडाहटले म त भावविभोर भए। देश र जनताको हितमा पार्टी र क्रान्तिको लागि विरोधीको किल्लामा धावा बोल्ने त्यो क्रान्तिकारी जोश र उत्साहलाई मनैदेखि सलुट छ । सानो मन बनाएका, काम भन्दा कुरा बढी गर्ने, रेडिमेड रिपोर्टिङ पेस गर्ने कतिपय ठग कामचोर प्रवृत्ति बोकेका मान्छेहरूलाई गतिलो झापड दियो भोपाल विस्तारित बैठकले । उक्त विस्तारित बैठकले आठौं अखिल भारत नेपाली एकता सम्मेलन आगामी २०२२ फरवरी २७–२८ र १ मार्चको गर्ने निर्णय गर्दै ६९९ सदस्यीय केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति गठन गरेको छ । त्यही अनुरुप भारतव्यापी रूपमा क्षेत्रीय स्तर, नगर स्तर, टोल समितीसम्म सम्मेलनको प्रचार प्रसार तयारी व्यापक रूपमा चलिरहेको छ ।
फुचुंग्री : ति दुई चारजना फुटपरस्त तत्वहरूलाई यो आठौं अखिल भारत नेपाली एकता सम्मेलनले नघरको नघाटको बनाउने भयो हैं ? यिनीहरू त रिसले चुरचुर भएका होलान नि काका ?